My Vodafone waxaa lagu cusbooneysiiyay naqshad cusub | Wararka IPhone
My Vodafone waxaa lagu cusbooneysiiyay naqshad cusub
Miguel Hernández | | iPhone, dhowr
Hadda ficil ahaan dhammaan shirkadaha taleefannada waxay leeyihiin codsiyo u gaar ah oo ay ku maareeyaan qaybo badan oo ka mid ah khadadkayaga qandaraaska lagu qaato. Kii rabay inuu howsha ugu dheer qabto Yoigo, waana inaan tagno codsiyada qeybta saddexaad, laakiin hadda waxay leedahay codsi u gaar ah. Xaaladdan oo kale waan ka hadlaynaa My Vodafone, Codsiga mobilada Vodafone waxyar ayaa la cusbooneysiiyay, oo ay ku jiraan naqshad cusub. Warkaan waxaa inta badan diirada la saaraa liiska hoos-taga bidix, taasina waa in barnaamijka My Vodafone uu wax badan ka fiicnaaday marinka cusbooneysiinta.
Waxaan xasuustaa sanadkii ugu horreeyay ee codsigayga My Vodafone, macno ahaan waxay ahayd mid aan la cabi karin. In yar ka dib, naqshad cusub ayaa guuleysatay, laakiin wixii aan la socon waxqabadka ayaa ahaa, waxaan isku aragnay dalab aad u gaabis ah oo u baahan xog badan oo laga soo dejiyo (in kastoo markaan adeegsanayno barnaamijka My Vodafone xogta aan naga qaadanaynin). Cusboonaysiintaan ugu dambeysa, kadib dhowr cusbooneysiin diiradda lagu saaray waxqabadka, waxaan kaheleynaa deg deg deg deg ah oo aad uqurux badan menu-hoos u dhaca.
Maxaa Ku Cusub Nooca 4.0.0
Waxaan soo bandhigeynaa menu cusub oo aad u muuqaal iyo aragti badan!
Helitaanka mid kasta oo ka mid ah astaamaha My Vodafone waxay noqon kartaa hawl adag hore.
Noocaan cusub, waxaan ku hagaajineynaa helitaanka maareynta alaabadaada.
Sii wad inaad dirto faallooyin noo oggolaanaya inaan horumarinno oo aan ugu soo dhowaanno waxa aad u baahan tahay.
Hadda dalabku wuu ka yara deggan yahay xaqiiqaduna waxay tahay in menu-ka wax laga beddelay uu lagama maarmaan ahaa, maxaa yeelay isku-darka ikhtiyaarrada ayaa ka dhigay wax yar oo qasan. Waxay ku jirtaa oo keliya 6,2 MB waxayna si guud ula jaanqaadaysaa qalab kasta oo iOS ah oo ka sarreeya iOS 7.1, waxay ku dhowaad ka shaqeyn doontaa qalab kasta oo iOS ah oo la heli karo. Qaado fursad aad uga faa iideysato sida ugu badan, xusuusnowna in Vodafone ay ku siineyso laba laab GBs sicirka xagaagan, ka fiiri qeybta "Dalacsiinta".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » My Vodafone waxaa lagu cusbooneysiiyay naqshad cusub
Sii iska xakamee midkoodna.
"Dhaqaaji dallacaaddaada ka hor 31-da Ogosto oo kudib labalaab GB-gaaga qaansheegad kasta illaa Sebtember 21 kaliya for 3."
Jawaab waxaan ahay
Ma doonayo midkoodna qashin qubkaas
Kani ma yahay adabtarada hillaaca ee la imaan doona iPhone 7?
Microsoft Pix, wuxuu noo ogolaanayaa inaan sawirro kula qaadno iPhone-ka qaab xirfad ahaan u dhow